Dabaylaha Spain: Tramontana, Levante iyo Poniente | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Kala bixid, Saadaasha hawada
Dabayl. Dadku badanaa ma jecla wax badan, laakiin waxaa lagama maarmaan u ah dhirta inay faafto, maraakiibtu maraan, iyo ifafaalaha saadaasha hawada oo la mid ah duufaanno ama duufaanno la sameeyo. Maanta sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sidii isha quwada, markaa muhiimaddeeda ayaa kordhay oo kaliya.
Isbaanishku waa wadan leh odhaah aad u calaamadeysan. Waxay ku hareeraysan tahay Badweynta Atlantik iyo Badda Dhexe, taas oo ah sababta noocyo badan oo dabaylo ah loo kala sooco. Kuwa ugu caansan waa Levante, Tramontana iyo Poniente. Hubaal inaad waligaa maqashay iyaga, laakiin Ma garan karnaa waxa astaamahoodu yihiin iyo sida ay noo saameynayaan?
1 Waa maxay dabaysha sideese loo soo saaraa?
2 Dabaysha Levante
3 Dabaysha Tramontana
4 Dabayl Galbeed
4.1 Badda galbeed
4.2 Galbeedka galbeed
Waa maxay dabaysha sideese loo soo saaraa?
Kahor intaadan guda galin mawduuca, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa dabayshu tahay iyo sida loo soo saaro. Hagaag dabayshu waa mid keliya hawada hawada ee ku dhacda jawiga wareegga iyo tarjumaadda meeraha awgeed.
Tan waa in lagu daraa in shucaaca qoraxda uusan isku mid ka ahayn adduunka oo dhan, sidaas kala duwanaanshaha cadaadiska ayaa la soo saaraa oo sababa hawo kulul, oo u janjeerta inay kacdo, si ay u barakiciso cufnaanta hawada dabaysha dhalisa Waxay kuxirantahay xoogooda, waxay kahadli doonaan hawo, duufaano ama duufaano.
Qalabka ugu horumarsan ee aad ku cabbiri karto xawaaraha dabaysha ayaa ah cabiraha jirka, taas oo waliba naga caawinaysa saadaalinta cimilada.
Isbaanishka waxaa ka jira 3 nooc oo dabaylo ah kuwa ugu caansan. Aan aragno astaamaha mid kasta oo ka mid ah.
Tani waa dabayl ku dhalatay bartamaha badda dhexe laakiin taasi gaadho xawaareheeda ugu sarreeya (100km / saacaddii) markii laga gudbayo marinka Gibraltar. Waxay mas'uul ka tahay xaqiiqda ah in xeebta Andalusiya ee Atlantic ay leedahay cimilo qalalan, iyo in wejiga bari ee Rock of Gibraltar roobku uu yahay mid muhiim ah.
Waxay dhacdaa bil kasta oo sanadka ka mid ah, laakiin waxay ugu badan tahay inta u dhexeysa bilaha Maajo iyo Oktoobar. Awooddiisa darteed, waa wax caadi ah in maraakiibtu aysan ka bixi karin dekedaha Tangier, Algeciras iyo Ceuta, maaddaama marinka Gibraltar uu yahay nooc ka mid ah masrax dabiici ah oo ka soo horjeeda marinka dabaysha. Sidaa darteed, Levante xawaarahaaga kordhi sameynta hagitaan aan macquul aheyn.
Haddii aan ka hadalno heer kulka, waa macquul inay sarreeyaan, gaar ahaan xilliyada xagaaga markay isdiiwaangeliyaan inta u dhexeysa 35 iyo 42ºC meelo badan oo Andalusia ah, sida Huelva ama Cádiz. Waana markii Levante uu ka gudbo dhammaan bariga Andalus, waxay lumisaa qoyaan iyo kuleyl badan markay gaarto galbeedka, taasoo keenta in qoyaanka jawigu kor u kaco.
Tani waa dabayl 'waan ogahay shaqsiyan'. Magaceedu wuxuu ka yimid Laatiinka, oo macnaheedu yahay ka baxsan buuraha. Waxay ka dhacdaa waqooyiga-bari ee gacanka, inta udhaxeysa Jasiiradaha Balearic iyo Catalonia. Waa dabayl qabow oo ka timaadda woqooyiga taas oo kordhisa xawaareheeda koonfur-galbeed ee bartamaha Faransiiska ee Massif iyo Pyrenees. Waxay ku dhici kartaa qulqulka illaa 200 kiilomitir saacaddii.
Mallorca gudaheeda waxaan ku leenahay Kala duwanaanta buurta Tramontana (Tramontan oo ku taal Majorcan), oo ah buuro kala duwan oo ku yaal waqooyiga iyo koonfur-galbeed ee jasiiradda. Croatia, gaar ahaan jasiiradda Cres, qaybta woqooyi ee jasiiradda waxaa loo yaqaan 'tramontana'.
Cimilada ayaa ka yara qabow kuwa kale, sidaa darteed flora iyo fauna aad ayey u kala duwan yihiin. Tusaale cad ayaa ah in meelo badan oo ka mid ah Sierra de Tramuntana, halkaasoo ay dabayshu kula kacayso xoog badan, waxaan ka heli karnaa khariiddada khariidadda ah ee keliya ee ku nool Jasiiradaha Balearic: the Acer opalus 'Garnatense'. Geedkani wuxuu ku nool yahay oo keliya cimilo dhexdhexaad ah, oo dhaxan hoos u dhigta -4ºC. Meesha kaliya ee jasiiradaha ah ee heerkulkeedu aad u hooseeyo waa si sax ah Sierra.
Waxyaabaha ay dabayshaani leedahay ayaa ah in marka ay dhacdo, cirku badanaa waa midab buluug ah oo daran aad u qurux badan
Poniente wuxuu ka yimaadaa galbeedka wuxuuna ka dhacaa bartamaha jasiiradda U kaxee dabeylaha Atlantic dhanka jasiiradda Waa dabayl qabow oo qoyan oo badanaa ka tagta roobka. Laba nooc ayaa lagu kala soocayaa: galbeedka galbeedka iyo Atlantic.
Tani waa dabayl kor u qaadeysa heerkulka isla markaana hoos u dhigta qoyaanka xilliga kuleylaha, waxayna keentaa in meerkurida heerkulbeegga ay hoos u dhacdo xilliga qaboobaha. Marka, Murcia waxay leedahay heer-kulka ugu sarreeya dalka: midna kama badna ama ka yaraan 47'2ºC 4-tii Juun, 1994.
Tani waa dabayl aad u qoyan oo qabow ka soo dhacda Badweynta Atlaantik. Inta badan ma afuufo wax ka badan 50km / saacaddii iyo heerkulku kama badna 30ºC inta lagu jiro saacadaha dhexe ee maalmaha xagaaga.
Sida aad aragto, nooc kasta oo dabayl ahi waxay leedahay astaamo u gaar ah. Ma ogeyd iyaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Dabaylaha Spain: Tramontana, Levante iyo Poniente
Waa maxay sababta dabaylaha ugu caansan Spain?
Badanaa sababta oo ah soo noqnoqodkooda iyo iskucelceliska xawaaraha, maadaama ay afuufayaan maalmo badan sanadkii iyo xawaare celcelis sare leh, marka lagu daro xaaqidda aagagga juqraafiyeed ee ballaaran. El Cierzo sidoo kale waxaa lagu dari karaa kuwa ugu caansan.
Ku jawaab tamar
Cajiib! Waxba kamaan aqoon mawduucan. Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay ✅. Waad ku mahadsan tahay casharka.
Waa salaaman tahay Tatiana.
Waxaan ku faraxsanahay inaad xiiso u heshay.
Aad baad u mahadsan tihiin waxay iga caawisay wax badan, waxay iga caawisay inaan miisaanka dhimo oo aanan neefsan si adag
Ku jawaab tupapyyxuloo